कपालको स्याहार गर्न उपयोगी टिप्सहरू !! | सुदुरपश्चिम खबर
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७९
कपाललाई व्यक्तिको सुन्दरतासँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ । राम्रो र स्वस्थ कपाल सबैको चाहनाको कुरा हो । हामी टेलिभिजनमा विभिन्न विज्ञापन हेर्छौ जसमा बलियो, राम्रो र बाक्लो कपाल देखाएर कपालमा लगाउने विभिन्न उत्पादनको विज्ञापन गरिएको हुन्छ । त्यस्तो देख्दा त्यस्तै कपालको रहर लाग्नु स्वभाविक हो । केही कुरामा ध्यान दिन सके कपाललाई राम्रो र स्वस्थ बनाउन सकिन्छ ।
कपाल नियमित नुहाउने
कपाल नियमित रूपमा नुहाउनाले कपाल फोहोर र धेरै चिल्लो हुन पाउँदैन । कपाल हप्तामा कतिपटक नुहाउने भन्ने कुरा कपालको प्रकारले पनि निर्धारण गर्छ । यदि कपाल धेरै नै सुक्खा छ भने हप्तामा २ पटक भन्दा नुहाउनु हुँदैन । धेरै नै चिल्लो हुने कपाल भने एक दिन बिराएर नुहाउनु राम्रो हुन्छ ।
रसायन नभएको स्याम्पुको प्रयोग
वातावरणमा रहेका कपाललाई नोक्सानी गर्ने सबै तत्त्वलाई नियन्त्रण गर्न सक्दै सकिँदैन । तर केही कुरामा भने नियन्त्रण गर्न सकिन्छ जस्तो की हामीले प्रयोग गर्ने स्याम्पु । कपाल नुहाउँदा रसायनको मात्रा एकदम कम अथवा रसायन नै नभएको स्याम्पु प्रयोग गर्नुपर्छ । यस्तो स्याम्पु कपालको लागि स्वस्थ मानिन्छ । आफ्नो कपालको प्रकार अनुसार सुहाउने स्याम्पु प्रयोग गर्नुपर्छ । सल्फेट र पराबेन स्याम्पुमा कपालको संरक्षण र नरम कपालको लागि भनेर प्रयोग गरिएको हुन्छ तर दीर्घकालमा यी तत्त्वले छाला हानी गर्ने र हर्मोनजन्य परिवर्तनको सम्भावना उच्च हुने बनाउँछ ।
कपाललाई प्राकृतिक तरिकाले सुकाउने
कपाल सुकाउने मेसिनले कपाललाई सुन्दर त देखाउँछ तर तापद्वारा कपाललाई स्टाइल दिँदा त्यसले कपालका जराहरूलाई क्षति पु¥याउँछ । यदि कपाललाई स्टाइल दिनैपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ भने मात्र कृत्रिम तरिकाले वा मेसिनले कपाल सुकाउने र स्टाइल दिने काम गर्नुपर्छ । कपाललाई नुहाइसकेपछि हावामा अथवा नरम तौलियाले पुछेर सुक्खा बनाउनुपर्छ । चिसो कपाल काइँयोले कहिल्यै कोर्नु हुँदैन । कपाललाई तौलियाले बेस्सरी रगेट्नु पनि हुँदैन । त्यसो गरेमा कपालमा क्षति पुग्छ ।
कपालमा राम्रोसँग तेल लगाउने
कपाल नुहाउनुभन्दा पहिले कपालमा राम्रोसँग तेल लगाएर मसाज गर्नुपर्छ । यसले कपालको जरामा रक्तसञ्चार गराउन मद्दत गराउनुको साथै मांसपेशीमा आराम महसुस गराउने, कपालमा चमक ल्याउने र कपाललाई आवश्यक पोषण दिने काम गर्छ । कपाल मसाज गर्न नरिवलको तेल, बदामको तेल, ओलिभ तेल, क्यास्टर तेल, तोरीको तेल प्रयोग गर्न सकिन्छ । कपालमा खनिज तेल भने प्रयोग गर्नु हुँदैन । मनतातो तेललाई कपालमा बिस्तारै लगाएर तौलियाले केही समय टाउको ढाकेर छोडिदिनुपर्छ । स्याम्पु लगाउनु पहिले सुतीको नरम कपडाले कपालको तेल सोस्नुपर्छ । यसले कपालबिच घर्षण भई कपाल टुक्रिने समस्याबाट बचाउँछ ।
नियमित रूपमा कपाल छाँट्ने
कपालमा हाँगा फाट्ने समस्या समाधान गर्न प्रत्येक ६ देखि ८ हप्तामा कपाल छाँट्नुपर्छ । तनाव, प्रदूषण, धुवाँ, तापले स्टाइल दिनु जस्ता कारणले कपालमा हाँगा फाट्ने र कपाल क्षति हुन्छ । कपाल छाँट्नाले जादु भएजसरी कपाल त बढ्दैन तर कपाल स्वस्थ भने पक्कै पनि हुन्छ ।
प्रशस्त पानी पिउने
आन्तरिक हाइड्रेसन र बाहिरी हाइड्रेसनको सन्तुलनले मात्र कपाललाई स्वस्थ बनाउन सक्छ । यसका लागि हाइड्रेटिङ हेयर केयर उत्पादन प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर दैनिक कम्तीमा पनि ३ लिटर पानी पिउनाले कपाल प्राकृतिक रूपमा नै राम्रो र स्वस्थ हुन्छ ।
स्वस्थ खाना खाने
कपालको हेरचाहको लागि दोहो¥याउँदै गर्दा हामीले के खाने गर्छौ भन्ने छुटाउनु हुँदैन । हाम्रो कपाल प्रोटिन र एमिनो एसिडले बनेको हुन्छ । कपाल वृद्धि हुन र व्यवस्थापन हुन प्रशस्त पोषणको आवश्यकता पर्दछ । अण्डा, बेरी, बदाम, माछा, हरियो सागपात, सखरखण्ड स्वस्थ कपालको लागि खानै पर्ने खाना हो ।
टोपी प्रयोग गर्ने
जसरी सूर्यबाट आउने हानिकारक किरणले छालालाई क्षति पु¥याउँछ त्यसरी नै यसले कपाललाई पनि क्षति पु¥याउँछ । सूर्यको किरणले कपालको प्राकृतिक चिल्लोलाई सोसेर कपाल सुक्खा बनाइदिन्छ । यसले कपाल बिग्रिन्छ । त्यसबाट बच्नको लागि घाममा निस्कँदा ह्याट, क्याप प्रयोग गर्नुपर्छ । मकालु खबर बाट सभार
गर्मीमा दाँतको सुरक्षा : चिसो पेय पदार्थ कति र कसरी पिउने ?
पाचनतन्त्रलाई सफा र बलियो राख्ने काइदा !!
कसरी रहने सधैं स्वस्थ ?